Umthandazo ku-Saint Jude Thaddeus ngemali Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Namhlanje siza kuthetha umthandazo ku Ongcwele uJude Thaddeus yemali kubo bonke abo bafuna uncedo malunga noku. Apha ngezantsi siza kukubonisa amagama esikhalazo kule Ngcwele.
U-Saint Jude Thaddeus eze kum kule nkalo inkulu, ukuze ndifumane intuthuzelo noncedo oluvela ezulwini.
1 Umthandazo ku-Saint Jude Thaddeus ngemali kunye noqoqosho
1.1 Ngubani uSan Judas Tadeo?
1.2 Umthandazo ku-Saint Jude Thaddeus ngemali
1.2.1 Imali kunye nomsebenzi
1.2.2 Kwibhanti ekhawulezayo
Umthandazo ku-Saint Jude Thaddeus ngemali kunye noqoqosho
Imithandazo iyasivumela ukuba sinxibelelane noThixo uSomandla, simcele ukuba asincede kwiinkalo ezininzi zobomi bemihla ngemihla, kodwa singaya nakwabaNgcwele abahlukeneyo ukuba basithethelele phambi koThixo iNkosi yethu. Ngale ndlela sigxila kwiNgcwele ethile kwaye sichaze iminqweno yethu kunye nezinto ezisixhalabisayo. Kungenxa yoko ngeli xesha siza kuphakamisa yethu Umthandazo ku-Saint Jude Thaddeus ngemali.
Kukho amaxesha apho sikwimimoya elungileyo kwaye ubomi bethu bubonakala ngathi buhamba ngamaxesha amnandi. Ngelishwa loo maxesha awahlali ngonaphakade, kuba into ebomini bethu ayihambi kakuhle, kwezi meko izinto ezininzi zinokuba nefuthe kwaye eyona nto sinokuyenza kwezo meko kukuya emthandazweni, ukuqondisa unxibelelwano noBawo wethu ongunaphakade okanye, ukusilela. ongcwele onokusinceda.
Ngubani uSan Judas Tadeo?
U-Saint Jude Thaddeus wayephila kwinkulungwane yokuqala, wayengumzala ka Yesu kunye neqabane lakhe ixesha elide, ngelixesha uYesu waqala ukushumayela ilizwi leNkosi, u-Judas Thaddeus wamlandela, waba ngomnye wabantu bakhe, waba omnye wabapostile abalishumi elinababini. Igama lakhe linokuqaqanjiswa kwiincwadi zeVangeli njengoTadeo okanye uJudas de Santiago.
Ungoyena ungcwele wabaNgcwele abangcwele, kuba kwinkolo yamaKatolika uthathwa njengomxhasi wezizathu ezinzima nezibi, kungoko sinokubuyela kuYesu Krestu ngaye, ngemithandazo eyahlukeneyo apho simcenga khona ukuba asinike impilo, amandla , amandla, inzolo, ukonwaba kuthi kunye nawo onke amalungu osapho lwethu, sinokucela noncedo ngemali.
Xa senza umthandazo ku-Saint Jude Thaddeus sichaza iimvakalelo zethu kunye neenkxalabo zethu, kodwa ukufumana impendulo kumthandazo wethu, kufuneka sithandaze ngokholo lokwenene. Xa sisenza ngale ndlela, uya kusimamela aze aphendule imithandazo yethu.
Kwimeko apho utyhubela kwimeko ebuthathaka ngeengxaki zemali, ungaya nokuzithemba okukhulu kuSan Judas Tadeo. Ungasoloko uthandaza kwiiNgcwele zamaKrestu ngoncedo olungcwele.
Sukulinda ukuba uphelelwe yimali yokuya eSan Judas Tadeo, chitha imizuzu embalwa yexesha lakho ukwenza lo mthandazo kwaye ungazikhathazi ngemali. Zama imithandazo esiza kukubonisa apha ngezantsi kwaye ufumane uncedo luka-Saint Jude Thaddeus ngokukhawuleza.
Umpostile oyingcwele uYuda oNgcwele, umkhonzi othembekileyo nomhlobo kaYesu! ipateni yamatyala anzima nalawo anzima. Thandazele.
Imali kunye nomsebenzi
Ukuba imeko yakho kukuba awunamsebenzi kwaye uyaphelelwa yimali, oku umthandazo kuSan Judas Tadeo ngemali yeyakho. Ngalo mthandazo ungalibala malunga nokuphazamiseka kwemali, yi-novena, ke kuya kufuneka uyicengceleze iintsuku ezili-9 zilandelelana ngaphambi kokuba ulale.
'' U-Saint Jude Thaddeus, Wena, uphantsi kukaYesu Krestu, umphathi wezizathu ezinzima nezibi.
Namhlanje ndenza lo mthandazo kuwe ngokholo olukhulu, ndibheka kuwe ngoncedo lwakho.
Ndizifumana ndidakumbile kwaye ndikhathazwa, ngenxa yokunqongophala kwemali.
Wena ungcwele wam ongcwele kunye nomkhuseli obekekileyo, ndiyakucela ukuba wamkele umphefumlo wam, umzimba, ingqondo kunye nentliziyo.
Ndiyakucela ngentobeko enkulu kwaye uguqe phambi kwakho, yiNtliziyo eNgcwele kaYesu, ukuba uthi ulwazelelelo lwakho kum kwaye wamkele umthandazo wam.
Wena owongezelekileyo ngokudityaniswa yiqhina losapho kwiNkosi yethu uYesu Krestu, ubunothando olungenakuthelekiswa nanto ngaye, kwaye uluncedo olunamandla kubo bonke abo bakwiimeko ezinzima.
Thandazela uSanta wam ongcwele kwaye undincede.
Ukuze ufumane impendulo ekhawulezileyo nenempumelelo kwezi mfuno zindongamele.
Yenza ukuba ndikwazi ukufumana imali ngokukhawuleza, njengoko ndinemvo yongxamiseko.
Kuba kufuneka ndijongane neentlawulo kunye namatyala, ukusombulula iindleko zam kwaye ndihlale ngoxolo.
Ndiyakubongoza ukuba undimamele kwaye undinike into endiyilangazelelayo:
(Chaza into oyifunayo)
Ongcwele oyiNgcwele uYude, ebekekileyo enothando olukhulu kunye nokuzinikela okukhulu. Ndiyakucela ukuba ufike kubukho bukaThixo undithandazele, ukuze undikhusele ngalo lonke ixesha.
Ngamana uncedo lwakho lungapheli kunye nentuthuzelo yakho. Ngobabalo lukaYesu, uMariya noJosefu. Ndiphe inkululeko, umsebenzi kunye nempilo eninzi, ukuze impilo ifakwe kwindlu yam.
Ndiyathembisa ukukhuthaza ukuzinikela kwakho okwenyani ukusuka kulo mzuzu, njengenxalenye yothando lwam kunye nombulelo infinito ngenxa yeenzuzo zakho. ''
Ukugqitywa kwe umthandazo ku-Saint Jude Thaddeus Kuya kufuneka ucengceleze inkolelo, ucengceleze imithandazo emithathu kaBawo wethu, Thobisa uMariya kunye noGloria abathathu.
Kwimizuzu engxamisekileyo xa kufuneka ufumane imali ngokukhawuleza, ungakwenza oku umthandazo ku-Saint Jude Thaddeus.
»Othandekayo oNgcwele uJude Thaddeus, uzuko olukhulu, olukhulu kunye nomangaliso.
Thandazela ingcwele yam kwaye undincede, ngoku ndindedwa kwaye ndifuna uncedo lwakho ngakumbi kunangaphambili,
Namhlanje ndinxunguphele kwaye ndonwabile, ndiyakucela ukuba undincede ngoncedo lwakho lwenceba, undamkele phantsi kokhuseleko lwakho olunamandla kwaye undithuthuzele kwintlungu yam.
Ndiyakubongoza ukuba usebenzise amalungelo akho amangalisayo owanikiweyo, ukunceda amashwa am.
Ngamana ndingafumana intuthuzelo noncedo lwakho oluvela ezulwini kuzo zonke iimfuno ezindikhathazayo namhlanje.
Ndincede kule ngxaki yokunqongophala kwaye undityhale ukuze ndifezekise into endiyilangazelelayo
(Chaza isicelo sakho apha)
Umxhasi oyiNgcwele uYude, ndibeka ithemba lam kuwe, ndinike oko ndikucelayo,
Ndiyicelela ukulungelwa kwam okwethutyana kunye naphakade, ukuze ndikwazi ukudumisa uThixo kunye nawe, kunye nabo bonke abakhethiweyo, ngonaphakade. Ndiyabulela ngokungapheliyo uYuda oNgcwele.
Kwaye ndiyathembisa ukuba soze ndilibale olu lubabalo lukhulu, ndiyathembisa ukusoloko ndikuhlonipha njengomphathi wam okhethekileyo nonamandla, ndiya kusasaza ukuzinikela kwakho kuye nakubani na okudingayo. Amen. »
Ukuba ulithandile eli nqaku, ndiyakumema ukuba ufunde malunga: Umthandazo weNkosi yemimangaliso. Ukwazi ngakumbi malunga Umthandazo ku-Saint Jude Thaddeus ngemali ungabona le vidiyo ilandelayo: